यसपटक मनसुन किन एक साता ढिलो आइपुग्दैछ नेपाल ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV यसपटक मनसुन किन एक साता ढिलो आइपुग्दैछ नेपाल ? | Sagarmatha TV
यसपटक मनसुन किन एक साता ढिलो आइपुग्दैछ नेपाल ?
काठमाडौं । यस वर्ष मनसुन एक साता ढिलो भित्रिने भएको छ। नेपालमा मनसुन आजै अर्थात जुन १० का दिन भित्रिनेभएपनि यसपटक एकसाता ढिलो गरी भित्रिने भएको माैसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार आर्यालले बताए।
‘मनसुन भित्रिनका लागि जुन खालको वातवरण हुनुपर्ने हो त्यो बनिसकेको छैन विस्तारै बन्ने क्रममा छ ।” उनले भने, ‘मनसुन प्रवेश गर्नका लागि स्थानीय हावाभन्दा पनि मनसुनी हावाको प्रभाव बढी हुनुपर्छ। तर, अहिले स्थानीय वायुको प्रभावले दिनभर घाम लाग्ने तथा बिहान, बेलुका र रातिको समयमा मेघ गर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ।’
नेपालमा मनसुन भित्रिनका लागि दक्षिण पूर्वी हावा बङ्गालको खाडीबाट वायुमण्डलको तल्लो सतहदेखि करीब छ किलोमिटर माथिसम्म प्रवेश हुनुपर्छ। तर, अहिले वायुमण्डलको तल्लो सतहमा मात्र त्यस्तो हावाको प्रवेश देखिएको माैसमविदले बताएका छन्।
जलवाष्युक्त हावाको वायुमण्डलको माथिल्लो सतहसम्म प्रभाव कायम रहेमा मनसुन शुरु हुने मौसमविद् आर्यालले जानकारी दिए। मनसुन पूर्ण सक्रिय हुनका लागि मनसुनी हावा वायुमण्डलको तल्लो सतहदेखि माथिलो सतहसम्म रही त्यसको प्रवेश राम्रोसँग देखिन न्यून चापीय रेखा स्प्रष्टसँग देखिनुपर्छ। अनि, न्यून चापीय क्षेत्रको विकास भएर न्यून चापीय रेखा नेपालतिर परेकोको हुनुपर्छ, सँगै उच्च चापीय क्षेत्रको विकास पनि भएको हुनुपर्छ।
सामान्यतया नेपालमा मनसुन शुरु हुने समय जुन १० हो । यसवर्ष मनसुन एक साता ढिलो गरी शुरु हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गतवर्ष जुन ८ मा मनसुन शुरु भएको थियो।